မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ်များ ငှားရန် | ShweProperty.com
ငှားရန် - Pathein-Chaungthar Road (ပုသိမ်-ချောင်းသာလမ်းမ)
ပုသိမ် ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
*Location – Pathein-ChaungThar Road, Pathein Township. *Price – 17 Lakhs *Property Type — House(2.5RC) *Area — 3480 sqft *Rooms formation — 5-Master Bedrooms, 10-Normal Bedrooms, 5-Air Con, Living room and Kitchen. *Floor Type — Ceramic, 6-Bathrooms and ready to live located at Pathein Township....
*Location – Pathein-ChaungThar Road, Pathein Township. *Price – 17 Lakhs *Property Type — House(2.5RC) *Area — 3480 sqft *Rooms formation — 5-Master Bedrooms, 10-Normal Bedrooms, 5-Air Con, Living room and Kitchen. *Floor Type — Ceramic, 6-Bathrooms and ready to live located at Pathein Township.
Listed9November 2018
Pathein-Chaungthar Road (ပုသိမ်-ချောင်းသာလမ်းမ)
ငှားရန် - ချောင်းသာမြို့နယ်ကမ်းခြေအနီးရှိ ငှားရန်ရှိသော လုံးချင်းအိမ်…
ချောင်းသာ၊ ပုသိမ်ချောင်းသာလမ်းမကြီး ခြံအကျယ် ၄၀×၈၀ တိုက်အကျယ်၃၄×၅၀ 2.5RC ၊ အိပ်ခန်းMaster bedroom၅ခန်း FAN ခန်းက၁၀ခန်း၊ စုစုပေါင်း၁၅ခန်း၊…...
ချောင်းသာ၊ ပုသိမ်ချောင်းသာလမ်းမကြီး ခြံအကျယ် ၄၀×၈၀ တိုက်အကျယ်၃၄×၅၀ 2.5RC ၊ အိပ်ခန်းMaster bedroom၅ခန်း FAN ခန်းက၁၀ခန်း၊ စုစုပေါင်း၁၅ခန်း၊…
Listed 30 June 2018
ဖုန်းဆက်ရန်09 26 400 98 98
ငှားရန် - ချောင်းသာနေရာကောင်းတွင်တည်းခိုခန်းငှားမည်.
ကမ်းခြေသို့(3မိနစ်)Walk(ကမ်းခြေနှင့်အလွန်နီး) 5MBR/10 Fan Double Rooms ရေမီးဖုန်းမီးစက်2လုံးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းပါမည် 1နှစ်-သိန်3း20...
ကမ်းခြေသို့(3မိနစ်)Walk(ကမ်းခြေနှင့်အလွန်နီး) 5MBR/10 Fan Double Rooms ရေမီးဖုန်းမီးစက်2လုံးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းပါမည် 1နှစ်-သိန်3း20
Listed 11 August 2017
Advertiser : U Aung Min
Phone no : 09448894074
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန်လုံးချင်းအိမ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ
ဘိုကလေး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ဓနုဖြူ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် အိမ်မဲ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ဟင်္သာတ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် အင်ဂပူ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ကန်ကြီးထောင့် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ကျိုက်လတ် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်
ကြံခင်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ကျောင်းကုန်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ကျုံပျော် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် လပွတ္တာ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် လေးမျက်နှာ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် မအူပင် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် မော်လမြိုင်ကျွန်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်
မြန်အောင် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် မြောင်းမြ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ငပုတော ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ညောင်တုန်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ပန်းတနော် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ပုသိမ် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ဖျာပုံ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်
သာပေါင်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ဝါးခယ်မ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ရေကြည် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ဇလွန် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် တွမ်းဇံ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ငွေဆောင် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန်